စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r များမှာ အထူးသ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် dampers ဘို့ ပြည့်စုံသော အခင်အရှင် auသို့mation solutions.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကော်ပိုရိတ် လူမှုရေး တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, မျှဝေခြင်း နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဖက် နှင့် cusသို့mers. တွင် ထို့အပြင်, အားလုံး ကျွန်တော်တို့၏ န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric စီမံခန့်ခွဲမှု, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ ကြီးမားသောest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer စိတ်ကျေနပ်မှု။
Air ကိုပေးဝေရေးဖိအားပေးမှုနှစ်ချက်သရုပ်ဆောင်: 2-8Bar ။
အမြင့်ဆုံးဖိအား: အဆိုပါအများဆုံး input ကိုဖိအား 8 ဘားဖြစ်ပါတယ်။
2. လူမီနီယမ် ခန္ဓာကိုယ်။
အဆိုပါ extruded ဆလင်ဒါ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ၏ဖန်ဆင်းထားသည်၏ခန္ဓာကိုယ် ဒဏ်ငွေ machine socket နဲ့ Hard anodized ပြင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်များနှင့်ပွတ်တိုက်၏ကိန်းကိုလျှော့ချဖို့မျက်နှာပြင်။
3. ပေါင်းစည်း ဒီဇိုင်း။
AOX-P ကို၏ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်း စီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအမျိုးအစား တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် actuators နှင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် actuators တူညီနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည် ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးဦးထုပ်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် module ကိုအလွယ်တကူအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင် install လုပ်ပါသို့မဟုတ်စမ်း demounting ။
HT (မြင့်သော +150 မှအပူချိန်) အဲဒါက FPM0င်-လက်စွပ်-15
ဒု (အနိမ့် +80 မှအပူချိန်) ဆီလီကွန်0င်-လက်စွပ်-40
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအားစက်မှုဇုန်၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွလာ လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) အနေဖြင့်နှစ်ဦးကို piston အကြားနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator နှင့်တွန်း ယင်းဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston ။ အဆိုပါ piston အကြားလေကြောင်း နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်လေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) မှဖြန့်ချိသည်။ ဤအတောအတွင်း piston ၏ထိန်သိမ်းတစ်ပြိုင်နက် output ကိုရိုးတံ anticlockwise (ဂီယာဘီး) ကိုလှည့်, လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းသို့ကြွလာလျှင်သော်လည်း လေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) မှလေထုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဘက် piston တွန်း လေကြောင်းဝင်ပေါက်ကနေဖြန့်ချိနှစ်ခု piston (2), က output ရိုးတံ (ဂီယာအကြား ဘီး) ကိုလှည့်ဖို့တစ်ပြိုင်နက် piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ယာရစ်။ (ထို piston တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်စုဝေးနေလျှင် အခြားက output ရိုးအမည်ရ, ပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် DLtype reverse)
1 ။ ကျနော်တို့ကပြည့်စုံထုတ်ကုန်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသေချာစေရန်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းမှုစနစ် pneumatic actuator သရုပ်ဆောင်တိုင်းထုတ်လုပ်ဇာတ်စင်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံရှိ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
3 ။ ကျွန်တော်တို့ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အမျိုးမျိုးသောပြပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။ အဆိုပါ Valve WorldãAchemaãအာရှရှိ WaterãPCVEXPOãECWATECHã INDOWATER , သင်တို့ရှိသမျှကိုအထံသို့လာနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အမြဲပေးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ ကောင်းစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောအသေးအမိန့်, နမူနာများနှင့်ထုတ်လုပ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
မေး: ငါသည်သင်တို့၏ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်စိတ်ဝင်စားတယ်လိုလျှင် နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ငါသည်သင်တို့၏ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုငျသောအခါအပြီးနောက်ပေးပို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်?
တစ်ဦးက: အားလုံး သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် 24hours အတွက် replied လိမ့်မည်။
မေး: နိုင်သလား ငါတကယ်သင့်ရဲ့ AOX-P ကိုဘယ်လောက်မကျင့်သောကြောင့်, ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာနမူနာ get စီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့အရည်အသွေး?
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်